Tartankii horyaalka degmooyinka Gobolka Banaadir oo hanatay kooxda Dharkinley… – Hagaag.com
Posted on 6 Diseembar 2019 by Admin in Sports // 0 Comments
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) oo soo xiray Horyaalka Degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa tilmaamay muhiimadda uu tartankaani u lahaa isdhexgalka bulshada iyo nabadeynta Caasimadda.
Gudoomiyaha ayaa u hambalyeeyey Kooxda Dharkinley oo hanatay sanadkan Horyaalka Degmooyinka Gobolka Banaadir, isagoo sidoo kale bogaadiyey dhammaan ciyaartooyda, macalimiinta iyo maamulka ka qeyb qaatay tartankan oo muujiyey ilbaxnimo iyo tartan
“Ciyaarahan caawa aan soo gabagabeynay waxa ay ka tarjumayaan qiimaha nabadda iyo is –dhexgalka bulshada. Dib u kabashada Caasimadda ee dhanka amniga iyo dhismaha kaabeyaasha dhaqaalaha waxa ay rajo gelinayaan dhallinyaradeenna Soomaaliyeed oo u badan dad firfircoon, hibo iyo xirfadba leh.” Ayuu yiri Duqa Magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa u mahadceliyey Wasaaradda Dhallinyarada iyo ciyaaraha, masuuliinta heer Federaal iyo heer gobol ee ka qeyb qaatay qabsoomidda tartankan, isagoo adkeeyey muhiimadda ay leedahay in lasii joogteeyo, lana sii dhiirri geliyo dhallinyarada Caasimadda.